Tag: orinasa eo an-toerana | Martech Zone
Tag: orinasa eo an-toerana
Mia, avy amin'ny Signpost, dia mizaha ny angon-drakitra momba ny mpanjifa an-tapitrisany maro hahitana fotoana vaovao handefasana ireo hafatra mety amin'ny fotoana mety. Ity teknolojia miorina amin'ny AI ity dia mamorona mailaka sy lahatsoratra izay setren'ny mpanjifanao, mampitombo ny varotrao 10% ary hampiakatra ny naotinao amin'ny isa kintana roa eo ho eo. Nanantona ny mpanjifa i Mia mba hijery raha toa izy ireo ka manome sosokevitra ny orinasanao ary, raha toa ka eny izy ireo dia manaraka ny fampahatsiahivana izy mba hiala
Ireo orinasa eo an-toerana dia very ny efa ho telo ampahefatry ny fitarihany noho ny fivoahan'ny varotra sy ny fizotry ny varotra. Na dia mahomby amin'ny fanatonana ny mpanjifa amin'ny Internet aza izy ireo, orinasa maro no tsy manana tranokala namboarina hanova fitarihana, aza manara-maso haingana na matetika, ary tsy mahalala hoe iza amin'ireo loharanom-barotra no mandeha. ReachEdge, rafitra marketing mifangaro avy ao amin'ny ReachLocal, dia manampy ny orinasa hanafoana ireo famoahana marketing lafo vidy ireo ary hitarika mpanjifa betsaka kokoa amin'ny alàlan'ny
Vao haingana izahay no nanomboka niara-niasa tamin'ny Angie ny List ary natao efa nisy maso fanokafam-taminay ny orinasa maro mahazo Leads alalan'ny naoty, hevitra sy ny efaha. Fa raharaham-barotra eo an-toerana izay manome ny mpanjifa amin'ny fanompoana lehibe, ny karama hevitra amin'ny Angie ny List madio fidiram-bola. Araka ny fandraharahana madinika Search Marketing Survey ny American Express Open, US orinasa madinika mbola afaka matoky ny teny-of-vava ho toy ny lalana ho ambony mpiantsena mba hahita azy ireo.